अपराधी आमाका निर्दोष सन्तान, जेलदेखि स्कुल – YesKathmandu.com
अपराधी आमाका निर्दोष सन्तान, जेलदेखि स्कुल
बिहीबार २८, फागुन २०७१
काठमाडौं । चार जना बालबालिका काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको केन्द्रीय महिला कारागारमा बस्छन् । यो उनीहरुको बाध्यता हो । जेलमा अहिले चारचार बर्षका निशानी कुमाल, यसमीन पुरी र प्रतीक कार्की अनि ५ बर्षीया अन्जु तुरल बस्दै आएका छन् । उनीहरु जेलमा आफ्ना आमाहरुले गरेका अपराधका कारण यहाँ बस्न वाध्य भएका हुन् । र, उनीहरुलाई आमाको काख र साथमा रहन सक्ने व्यवस्था भएकाले गर्दा उनीहरु केन्द्रीय महिला कारागाराभित्र राखिएको हो ।
उनीहरुको दैनिकी जेलदेखि स्कूल र स्कूलदेखि जेलसम्मको छ । बिहानको नौ बजे छि उनीहरुलाई स्कूल जान हतार हुन्छ । त्यसअघि आमाकै काखमा रहने यी सानासाना नानीबाबुलाई न आमाले उनीहरुलाई स्कूल पु¥याउँछन न त जेलकै कर्मचारीले । तर पनि उनीहरु शिक्षाको ज्योतिबाट बन्चित हुन परेको छैन । विहान ९ बजे उनीहरुलाई लिन प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका कर्मचारीहरु यहाँ आइपुग्छन् । र, नानीहरु पनि उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा स्कूलसम्म पु¥याउने गरेका छन् । जेलमै रहेका आमाहरुले उनीहरुलाई स्कूल जाने व्यवस्था गरिदिएपछि उनीहरु भविष्यको खोजीमा स्कूल तर्फ लागेका हुन् । चार जना साथमा साथ मिलाउँदै स्कूल पुग्छन् । उनीहरुको मुहारमा चमक देख्न सकिन्छ । स्कूल पुगेपछि उनीहरु देशको राष्ट्रिय गानसँगै प्रार्थना गर्छन् । भोटेबहालमा रहेको दीप हाइस्कूल हो, उनीहरु पढ्ने । बेलुका तीन बजेसम्म उनीहरु भविष्य खोज्दै अक्षर खार्न अभ्यस्त हुन्छन् ।
उनीहरुलाई यो स्कूलमा कुनै भेद्भाव छैन । उज्ज्वल भविष्यका लागि उनीहरुले लेखपढ गरिरहेका छन् । तीन बजे स्कूल छुटेपछि फेरि बालविकास केन्द्रकै कर्मचारीहरुले उनीहरु बस्ने घर अर्थात सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारसम्म पु¥याएर अभिभावको जिम्मा लगाउने गरेका छन् । जेलदेखि स्कूल र स्कूलदेखि जेल गर्दैमा उनीहरुको दैनिकी वित्ने गरेको छ । यसमध्येकी पाँच बर्षिया अन्जु तुरलले ठूलो भएपछि ड्राइभर बन्ने अबोध इच्छा सुनाइन् । कारागारमै बस्दै आएका चार बर्षीय प्रतीक कार्कीको अबोध इच्छाचाहीं हिरो बन्न चाहाना छ । फरक फरक परिवेशले उनीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । र, उनीहरु शिक्षाको उज्यालो घामबाट बन्चित नहोउन भनेर यो सत्प्रयास थालिएको हो ।
केकारण उनीहरु जेलमा छन् ?
आमाहरुले गरेको अपराधको सजाय भोगिरहेका छन्, निदोष बालबालिकाहरु । निराशी कुमालकी आमा कर्तव्य ज्यान, यसमीन पुरीकी आमा लागूऔषध, प्रतीक कार्कीकी आमा कर्तव्य ज्यान र अन्जु तुरलकी आमा लागूऔषध मुद्दामा केन्द्रीय कारागारभित्र थुनामा छन् । उनीहरुले गरेको अपराधकै कारण उनीहरुका छोराछोरी पनि जेलमा बस्न वाध्य भएका हुन् । कलिला वालवालिकाका आमाबुबा जेलमा परेको अवस्थामा उनीहरुलाई हेरचाह गर्ने कोही नभएको अवस्थामा जेलमै आश्रय दिने गरिएको जेलर शम्भुप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।
दयनीय सुविधा– १०० ग्राम चालम र पाँच रुपियाँ पचास पैसा खर्च
जेलमा रहेका उनीहरुले पाउने सुविधा निक्कै दयनीय छ । नेपाल कारागार ऐनले उनीहरुलाई दिने सुविधा निक्कै न्यून छ । कारागार ऐनको अनुसूची ३ ले नावालकलाई दिइने सुविधामा भनिएको छ–सात महिनादेखि १ बर्षसम्मलाई १०० ग्राम चालम र पाँच रुपियाँ पचास पैसा, १ देखि ३ बर्षसम्मलाई १ सय ५० ग्राम चामल र पाँच रुपियाँ पचास पैसा, ३ देखि ५ बर्षसम्मकालाई २०० ग्राम चामल र पाँच रुपैयाँ पचास पैसा । त्यस्तै उमेर अनुपातमा त्यहीअनुसार बढाएर दिने व्यवस्था छ भने परिच्छेद ४ अनुसार नाबालक बालवालिकालाई कमिज १, सुरुवाल १ वा घाँघर १ सरुवाल १ दरले बर्षको दुई पटक र सुतीको कोट १ गलबन्दी १ र टोपी १ बर्षको एक पटक दिने व्यवस्था छ । तर यो दयनीय अवस्थामा यी वालवालिका बाँच्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले गर्दा उनीहरुलाई विभिन्न संघसंस्थालको पहलमा समन्वय गरी दिने गरिएको रेग्मी बताउँछन् । जेलमा रहेका बालवालिकाहरुलाई राख्न समस्या हुने गरेका कारण उनीहरुलाई जेलबाट सकेसम्म वाहिर राख्न परोपकारी संस्थाहरुसँग जेल प्रशासनले हातेमाले गर्ने गरेको छ ।
जसले उनीहरुलाई स्कुल पु¥याइरहेछिन्
सीएनएन हिरो पुष्पा बस्नेतद्वारा सन्चालित प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रले चार बालवालिकालाई जेलबाट स्कूल र स्कूलबाट जेलसम्म पु¥याउने काम गरिरहेको छ । आमाको न्यानो साथ नछुटोस् भनेर उनीहरुलाई आमाकै साथमा राखिरहन यो काम गरिएको केन्द्रका अधिकारीले बताउँछन् । केन्द्रका कर्मचारी उमा थापाले यी वालवालिकालाई स्कूल ल्याउने लैजाने काम गरिरहेकी छिन् । उनीहरुलाई स्कूल पु¥याउने मात्रै होइन उनीहरु स्वस्थ र फुर्तिलो हुन सकुन् भनेर उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था समेत संस्थाले गरेको छ । प्रारम्भिक रुपमा उनीहरुलाई जेलमै पढाउने गरिएको थियो । महिला कारागारभित्रको यो बन्द संसारबाट उनीहरुलाई सबैसँग घुलमिल हुन सकुन र संसार बुझुन् भनेर स्कूल पु¥याएको पुष्पा बस्नेत बताउँछिन् ।
अहिले उनीहरुको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छ भने वाहिर संसार देखेर उनीहरु खुसी भएका छन् । जेललाई नै घर ठान्ने बालवालिकाहरुलाई आश्रय दिन सकेकोमा वस्नेत खुसी व्यक्त गर्छिन् ।
यी त उदाहारण मात्रै हुन्, वालविकास केन्द्रको संरक्षणमा अहिले देशभरीका विभिन्न कारागारमा रहेका वालवालिकाहरु छन् । नावालकहरुलाई आमाको साथ नछुटोस् भनेर उनीहरुलाई आमाकै साथमा राख्ने गरिएको हो भने ठूलो भएपछि केन्द्रले होस्टेलमा राखेर उनीहरुको पठनपाठन गर्ने सोच राखेको छ ।
उनीहरुलाई चाहिने गाँसबासको बन्दोबस्त पनि संस्थाले नै गरिरहेको छ । पुष्पाको यो परोपकारी कामले गर्दा अहिले यी चार बालवालिका मात्रै होइनन् जेलभित्र बन्दी जीवन बिताइरहेका अन्य कयौं बालवालिकाको समेत उद्दार भएको छ भने उनीहरुको भविष्य समेत उज्वल बनिरहेको छ ।
शक्ति प्रर्दशनमा ४ करोड खर्च, रकम तिर्न एमाओवादी मोर्चामा खैलाबैला
बलिउडकी चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुर हिरासतमा
महाशिवरात्रिमा यस्तो छ गाडीको रुट
राष्ट्रपतिलाई दुव्र्यवहार गर्ने १५ जनालाई मुद्धा चलाइएको छः गृहमन्त्री बस्नेत
बालुवाटारमा सत्ताको रस्साकस्सी, राजीनामा नदिन प्रचण्डलाई ओलीको आग्रह
गच्छदारलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन गगन थापालाई फिर्ता बोलाउने देउवाको तयारी, कांग्रेसमा हलचल
यी बेसाहरालाई वीर अस्पतालमा छाडेर भागेकी थिइन दीक्षा चापागाई
मन्त्रालय खोसिए पछि मन्त्री शाहीको जवाफ अब मेरो मन्त्री पद गयो त होला नि !
सन् १९५०को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति, तेस्रो बैंठक काठमाडौंमा हुँदै
पत्रकार व्यावसायिक बन्नुपर्दछ : मन्त्री थापा
दुर्घटना ग्रस्त विमान पुरै जल्यो, ५० भन्दा बढिको मृत्युको आशंका
निर्वाचन खर्च २० अर्ब (ककसले कति खर्च गरे )
एक सय ४१ सुदूरपश्चिमेली युवा बेपत्ता, राज्य बेखवर
चुनाव खर्चका लागि दलहरुद्वारा उद्योगी व्यावसायीलाई चन्दाको दवाब
यी हुन देउवा निवास घेर्न जाने कांग्रेसका असन्तुष्ठ नेताहरु
मोडलिङमा नै भविष्य बनाउन चाहान्छिन प्रज्ञा-भिडियो सहित